Oh.. My Blog!: ‘R ‘A ‘I ‘N ‘ ‘ ‘
စက်ရုံတရုံမှ အငွေ့တထောင်းထောင်း ထအောင် မှုတ်ထုတ်လိုက်သည်မှာ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဓါတ်ငွေ့များဖြစ်သည်- လေထုသည် မစုပ်ယူချင်၍ မရ- ထိုဓါတ်များကို စုပ်ယူ၍ ရေနှင့်သန္ဓေတည်ကာ မွေးဖွားပေးလိုက်သည်မှာ ဆာလဖြူရစ် အက်ဆစ်နှင့် နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်တို့ ကြီးကြီးစိုးစိုးပါဝင်သော အက်ဆစ်မိုးဖြစ်သည်- ပီအိပ်စ် အမှတ်အောက် တော်တော်နိမ့်သည်- သစ်တောများကို မျိုးတုန်းစေသည်- သစ်ရွက်များ အသက်ဆုံးရှုံးရသည်- လူတချို့ ကျန်းမာရေးထိခိုက်သည်- အင်းဆက်များသေသွားသည်ကိုမူ ၀မ်းသာရမလား ၀မ်းနည်းရမလား မသိ- ထိုကိစ္စ မည်သူ့တွင် တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်ပါသလဲ- စက်ရုံလား လေထုလား စက်ရုံကိုမောင်းနှင်နေသည့် လူသားလား- လူသားကိုမောင်းနှင်နေသည့် အတ္တလား- မပြောတတ်- သို့သော် ဒီပတ်ဝန်းကျင်တွင် အက်ဆစ်မိုးကတော့ မထင်ရင် မထင်သလို ရွာစဲ…..
သည်းသည်းမည်းမည်းရွာသွန်းဖြိုးနေသော မိုးသည်းညဖြစ်သည်- ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး မှောင်နဲ့မည်းမည်း ရှိလှ၍ မိုးသံလေသံကို ခဏဖယ်ထားပါက တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက် နေမည်မှာမလွဲပင်- သင်္ချိုင်းမြေတခုနှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင်တော့ မှိန်ပျပျမီးရောင်တခုကို တွေ့နိုင်ပါသည်- အနီးကပ် သွားကြည့်ှလျှင်မူ အကြော်ရောင်းနေသော အရွယ်လွန်အဖွား အို တယောက်ကို ဆီမီးခွက်အလင်းရောင်ဖြင့် တွေ့နိုင်ပါသည်- စားသုံးနေသူ လူကတော့ဖြင့် တယောက်မျှမရှိ- ထိုအချိန် တကိုယ်လုံး မိုးရေစိုရွှဲနေသော မိန်းမပျိုလေးတယောက် အကြော်ဆိုင်ထဲသို့ ၀င်လာသည်- ခိုက်ခိုက်တုန်နေသော သူမသည် ချမ်းနေသောကြောင့် မဟုတ်ပါ- ထိတ်လန့်စရာ တခုခုကို ကြုံခဲ့ရသောကြောင့် တုန်လှုပ်နေသည်မှာ သိသာသည်- အကြော်ဆိုင်ထဲသို့ အားကိုးတကြီး ၀င်ထိုင်လိုက်သည်- ရေနွေးခွက်ကို တုန်နေသော လက်များဖြင့်ငှဲ့လိုက်သည်- စိတ်နည်းနည်း တည်ငြိမ်လာသည့် အရိပ်ယောင်တွေ့ရသည်- ထိုအခါကြမှ စကားပြောနိုင်တော့သည်- အဖွားအိုကို သူတွေခဲ့ရသည့် အဖြစ်ပျက်ကို ပြောနေသည်- သူမ လမ်းလျှောက် လာတုန်း မိုးသဲသဖြင့် ညောင်ပင်ကြီးအောက် ခဏ၀င်ခိုနေခိုက် လူတယောက်နှင့်တွေ့သည်ဆို၏- မိုးကလဲသည်းလိုက်တာနော် စသည်ဖြင့် အလာပသလာပ များပြောနေရင်း ဘာမှပြန်မပြော၍ ထိုလူကို လှမ်းကြည့်လိုက်သောအခါ မျက်စိများ မျက်ခုံးများ နှခေါင်းများ ပါးစပ်များမပါသော မျက်နှာတပြင်လုံး ဘဲဥတလုံးကဲ့သို့ ချောမွေ့နေသော သူကိုတွေ့ခဲ့ရသည်ဟု ပြောနေသည်- သူမပြောနေတုန်းပင် ဆီမီးခွက်သည် မီးစာကုန်သွားသည်ထင်၏- မီးဖိုမှမီးတချို့၏ မှိန်ပျပျ အလင်းရောင်သည်သာရှိနေခဲ့သည်- ထိုအချိန် ပဲ့တင်ထပ်နေသော အသံတစ်ခုကို သူမ ကြားလိုက်ရသည်- ((((((ဒီလိုကြီးလား)))))). ဆိုသောအသံဖြစ်သည်- လျှပ်စီးတချက်လက်သွားသည်- အဘွားအိုသည်လည်း ဖွာလံကျဲနေသော ဆံပင်အောက်မှ ချောမွေ့နေသော ဘဲဥပုံသဏာန် မျက်နှာတခုနှင့်ဖြစ်သည်- ဘုရား သကြားမလို့ ထိုကဲ့သို့ မိုးသည်းညမျိုး မကြုံပါရစေနဲ့…
ကံဆိုးမသွားလေရာ မိုးလိုက်လို့ရွာသည်ဟု ကြားဘူးသည်- တအိမ်လုံးရွှဲရွဲစိုနေသည်မှာ ရေချိုးထားသော တဲအိမ်ကလေး အလားပင်- ကျန်ရှိနေသေးသော အိမ်ထဲမှ ပစ္စည်းများသည်လည်း သူ့ကြောင့်ပင် တခုမှရစရာမရှိတော့- ကံဆိုးမသည်လည်း မိုးလုံသော စားပွဲခုံအောက်မှ ထိုင်ကြည့်နေယုံမှလွဲ၍ တခြားမတတ်နိုင်- မိုးသည် သူတို့လိုလူတန်းစားအတွက်တော့ ဇိမ်ခံပစ္စည်းမဟုတ်ခဲ့ပါ- အင်မတန်ရက်စက်သော မိုးဖြစ်သည်-
၀ုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်းနှင့် အားလုံးကို လွတ်ချကာ ရွာချလိုက်သော မိုးဖြစ်သည်- အပူပင်တွေငြိမ်းအောင် ကမ္ဘာကို ဆေးကြောပေးသည်ဆိုသော သီချင်းလည်းကြားဘူးသည်-
အသံကော အလင်းကော ပူးပေါင်းခံစားခွင့်ရသည်- အရသာ အရှိဆုံးသော မိုးဖြစ်သည်-
မျက်နာလိုက်သည်ဟု ထင်စရာရှိသည်- တခါတခါတော့လည်း လှပသည်- နေပူမိုးရွာ သူခိုးလာ ဆိုသည့် စကားပုံမှာ ကွက်ကျားမိုးကြောင့်များ ဖြစ်ပေါ်လာသလားမသိ- သူခိုးများကြိုက်သည့် မိုးလား- အင်း ငတက်ပြားမိုး- ဒါပေမဲ့ သက်တန့်တချို့လည်း သူ့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်ထင်၏-ဘာပဲပြောပြော သူသည်လည်းခေါင်းမာစွာပဲ ရွာစဲ…..
အလွမ်းဓါတ်ခံရှိသော ကျနော့်အတွက် သုံးရာသီရွာပေးသည်- ဟီး- ရှက်လိုက်တာ..
အနောက်တောင် မုတ်သုန်လေ တ၀ုန်းဝုန်းနှင့် ဒီနေရာ တွင် ရွာပြီးပြီ-
ဟဲ ဟဲ ကျွှန်းခံစရာတောင် နှလုံးလမ်းကြောင်း မပါလာတဲ့ကျနော့်အတွက် ထိုမိုးသည် ခေါင်သည်- ကျနော်မမျှော်လင့်ရဲခဲ့သော မိုးများလား- တခါတခါတော့လည်း ကွက်ကျားမိုးကို အဖော်ပြုကာ လာရွာသေးသည်- ဖတ်သူက ကြော်ငြာမိုး ဟူ၍ သမုတ်သွားသေးသည်- မတတ်နိုင်..
လွန်တယ်ဟု အပြောခံရနိုင်သဖြင့် ထပ်မရေးတော့- ကြုံမှ ခေါင်းစဉ်တခုတပ်ပြီး ကို ရေးဦးမည်- လျှောက်မတွေးပါနဲ့ မိုးခြိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်- မိုးပြေးလေးကို အားငယ်မည်ဆိုး၍ ထစ်ချုံးမိုးကို အဖော်ခေါ်လိုက်ခြင်းသာ- သို့သော် တဖောက်ဖောက်နှင့် ရွာစဲ မျက်ရေတတောက်တောက် ကျစဲ..
ထိုမိုးသည် အငြိုးနှင့် ရွာသည်တဲ့-
မိုးပြေးလေးထက် ပိုဆိုးသည်- ရွာမလိုလို လာမလိုလိုနှင့် ကိုယ်ယောင်ပြသွားသော မိုးဖြစ်သည်- မူယာမိုး မာယာမိုးဟူ၍ပင် ခေါ်လို့ရနိုင်သည်- ပျော်ရွှင်စေရန် အရိပ်အခြေပြသွားတာကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ရမလိုလို-
ရိုင်းတယ်ပဲပြောပြော ဟိုတခါက ရေစိုထမိန်နဲ့ မိုးရေမှာ လှပခဲ့ဘူးတာ ဆိုတဲ့ စာသားကို အခုသေချာ ပြန်တွေးကြည့်တော့ ကြိုက်သလိုလို- မေမြို့ကိုတော့ ကြုံရင်သွားဦးမည်- မေမြို့မိုးနှင့်များ တွေ့မလားဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်-
ကျနော့်မိုးဖြစ်သည်- ရှင်းအောင်ပြောရလျှင် ဒီမိုးဖြစ်သည်- မိုးမျိုးစုံအောင် ရွာချပြစ်လိုက်သည်- မမယ်လိုဒီ နှင့် မဂျစ် တို့ နှစ်ယောက်ကြီးများတောင် ကျနော့်အပေါ်တက်၍ ရွာလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်- အမ်.. မြန်မာလိုတိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ရသည်မှာ တခါတရံ တော်တော် ဂွကျသည်- :P
ရောကုန်ပြီ- ရှုပ်ကုန်ပြီ- ထပ်ရေးရင် ထပ်ရှုပ်တော့မည်- ရော်ဂျာမိုး နေခဲ့တော့- မိုး.. ရေ .. တိတ်တော့…
Posted by Tesla at 2:02 AM